केबल सत्ता, फोहोरी राजनीति र माक्सवादमा मात्रै ध्यान छ हाम्रा नेताको : हामि प्रभावमा बाचेका छौ हामी कुनै भावले होइन : ✍️✍️अभिषेक अधिकारी
सिद्धान्त फरक छ तर पनि मानिसमा पर्ने प्र,भाव अनेक किसिमका हुन्छ्न। हाम्रो देश नेपालमा १० बर्ष मा हरेक चोटि ल ब्यबस्था परिवर्तन हुन्छ। चुनाव हारेकाहरु संबैधानिक समितिका सभापती बन्छ्न।
प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाउछ। प्र,भाव प्रभावशालिकै इच्छा र स्वा,र्थमा कहिले एकातिर ढल्किन्छ त कहिले एकातिर। त्यसैले यो सरकार प्रभावमुखि होइन भावमुखी बन्यो। त्यसै ठाउमा माधव, झलनाथ,प्रचण्ड,बाबुराम असफल भए।
काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरु घोर बि,रोध गर्थे त्यसैले गिरिजालाइ नगदिको खाचो पर्दा यी दुबैले के गर्जा टार्ने?मा,ओवादिलाइ प्र,भावले खाचो दियो तर थियो त केबल अनुशासनको। एमाले बाचेको का,रण एक रुपैयाँ एक्लैले खादैन।
काङ्ग्रेस जाल थप्छ, एमाले बल्छी हान्छ तर मा,ओवादी खोलामा वि,ष नै फालिदिन्छ। ढिलोचाडो नसुधि्रएको नेता र दलको हुँदैछ। के का लागि राजनिति त ? के का लागि सत्ता ? अबसर,धन र शक्ति भएकै बेला मानिस नम्र बन्नुपर्ने हो।
यो खेती हो राजनितिक दलको पनि। सत्ता नपाएसम्म नेपालका नेता घोर त्यागी देखिन्छ्न। पतन भएकै राम्रो होनि होइन र? केही गुदि नभएका जस्ता देखिन्छ्न। बोक्नुको अर्थमा तिनिहरुले राजतन्त्र,लो,कतन्त्र,गणतन्त्रवाद, माओवाद,माक्सवाद बोकेर के भयो?
संसारभरिका सबै वाद र दु,र्गती त नेपालमै देखिएका छ्न। राजादेखी, दल तथा नेताहरु सबै प्र,भाव प्रदर्शनिमै देखिए र रमाए। स,मस्या जस्ताको तस्तै छ। ठुला कमरेड मालिक भए भने साना कमरेड खलासी भए हात मिलाउने बानी भएपछि सबै बराबर।
माओवादी रुखै ढाल्न तिर लाग्यो। कमिशनको खेल र अबनाशको प्रमुख टाठाबाठाहरुले निजि प्रयोग गरेर आफ्नो प्र,भाव लगाए। लुठिमुङ्रोमा पोख्त युवा चाहियो। मधेसवादि दलको पतन अरु राजनैतिक दलको लोककल्याणकारी कार्यले होइन, अती प्र,भावका का,रणले देखायो जो पृष्ठभुमिमा देखाइयो।
नेताका कार्यकर्तालाइ जिन्दावाद जे कुरामा भन्दा पनि छुट छ। यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा दरबार, घरबार र भन्ने हो भने बोलिको पनि भर छैन। उ,पचारका नाममा जनताले तिरेको करको ला,खौं दु,रुपयोग गरि आफू घि,नलाग्दो फो,होरि राजनीतिमा ब्यस्त देखिन्छ्न। यो भस्मासुरतन्त्रमा कोहि कसैको नि,यन्त्रणमा छैन।